Kutonga mumamiriro ekunze akapokana naShell - Law & More B.V.
Kutonga munyaya yemamiriro ekunze yakanangana naShell
Mutongo weDare reRuwa reThe Hague mune nyaya yaMilieudefensie inopesana neRoyal Dutch Shell PLC (pano shure: 'RDS') idanho rinokosha mumatare emamiriro ekunze. KuNetherlands, iri idanho rinotevera mushure mekusimbisa kwekutonga kweUrgenda kutonga neDare Repamusorosoro, uko nyika yakarairwa kudzikisa mweya wayo zvichienderana nezvinangwa zvechibvumirano cheParis. Kwenguva yekutanga, zvakare kambani yakaita seRDS ikozvino inosungirwa kutora danho pakurwisa shanduko yemamiriro ekunze ine njodzi. Ichi chinyorwa chichajekesa zvinhu zvikuru uye zvinorehwa nemutongo uyu.
Kutanga, kugamuchirwa kwekuda kwakakosha. Dare risati rapinda muchibvumirano chehurumende, chikumbiro chinofanira kutenderwa. Dare rakatonga kuti chete zviito zveruzhinji zvinoshandira zvido zverino uye ramangwana zvizvarwa zvevagari vemuDutch ndizvo zvinogamuchirwa. Aya zviito, zvinopesana nezviito zvinoshandira zvido zvehuwandu hwepasi rose, zvine kufarira kwakaringana. Izvi zvinodaro nekuti mhedzisiro iyo vagari vemuDutch vachasangana nayo kubva mukushanduka kwemamiriro ekunze vanosiyana padiki pane avo vehuwandu hwepasirese zvachose. ActionAid haimiriri zvakakwana zvido zvevanhu vechiDutch pamwe nechinangwa chayo chakaumbwa pasi rose. Naizvozvo, kuda kwayo kwakaziviswa kusingagamuchirwe. Vamhan'ari vega vakaziviswawo kuti havagamuchirike mune zvavanotaura, nekuti havana kuratidza kufarira kwakaringana kwemunhu kuti vabvumirwe mukuwedzera kune zvakabatanidzwa.
Mamiriro ezvinhu enyaya yacho
Zvino izvo zvimwe zvezvikumbiro zvakamisikidzwa zvakanzi zvinogamuchirwa, dare rakakwanisa kuzviongorora zvakanyanya. Kuti itenderere kubvunzwa kwaMilieudefensie kuti RDS inosungirwa kuwana kudzikisira mhute ye45%, Dare pakutanga raifanira kuona kuti chisungo chakadai chiri paRDS. Izvi zvaifanirwa kuongororwa pachishandiswa chiyero chisina kunyorwa chekuchengeta hunyanzvi. 6: 162 DCC, mune ese mamiriro enyaya yacho anoita basa. Mamiriro ezvinhu akatorwa neDare aisanganisira zvinotevera. RDS inogadza mutemo weboka weboka rese reShell iro rinozoitwa nemamwe makambani mukati meboka. Boka reShell, pamwe nevatapi vayo nevatengi, rinotarisira huwandu hwe CO2 chisi, icho chakakwirira kupfuura kuburitswa kwenzvimbo dzinoverengeka, kusanganisira neNetherlands. Izvi zvinoburitsa shanduko yemamiriro ekunze, mhedzisiro yacho inonzwikwa nevagari vemuDutch (semuenzaniso muhutano hwavo, asi zvakare nenjodzi yemuviri nekuda, pakati pezvimwe zvinhu, kukwira kwemazinga egungwa).
Mhedzisiro yeshanduko yemamiriro ekunze inosangana nevagari vemuDutch, pakati pevamwe, inokanganisa kodzero dzavo dzevanhu, kunyanya kodzero yeupenyu uye kodzero yeupenyu hwemhuri husina kudzongonyedzwa. Kunyangwe kodzero dzevanhu dzichishanda pakati pevagari nehurumende uye nekudaro hapana chisungo chakananga kumakambani, makambani anofanirwa kuremekedza kodzero idzi. Izvi zvinoshandawo kana nyika dzikatadza kudzivirira kubva kutyorwa. Kodzero dzevanhu dzinofanirwa kuremekedzwa nemakambani dzinosanganisirwa mukati mutemo wakapfava zviridzwa zvakaita se Nhungamiro dzeUU Dzinotungamira paBhizinesi nekodzero dzevanhu, Yakatsigirwa neRDS, uye iwo OECD Nongedzo yeMultinational Enterprises. Ruzivo rwuripo kubva kuzviridzwa izvi zvinopa dudziro yeiyo isina kunyorwa mwero wekutarisira pahwaro hwekuti chisungo cheRDS chingafungidzirwe, sekureva kwedare.
Izvo zvinosungirwa nemakambani kuremekedza kodzero dzevanhu zvinoenderana nekukomba kwemhedzisiro yezviito zvavo pakodzero dzevanhu. Dare rakafungidzira izvi munyaya yeRDS pachishandiswa chokwadi chakatsanangurwa pamusoro. Zvakare, chisungo chakadai chisati chafungidzirwa, zvakakoshawo kuti kambani ive nemikana yakakwana uye simba rekudzivirira kutyorwa. Dare rakafungidzira kuti izvi ndizvo zvazviri nekuti makambani ane simba mukati mezvese cheni yekukosha: zvese zviri mukati mekambani / boka pacharo kuburikidza nekuumbwa kwemutemo uye kune vatengi nevatengesi kuburikidza nekupihwa kwezvigadzirwa nemasevhisi. Nekuti iro simba rakakura kwazvo mukati mekambani pachayo, RDS iri pasi pechisungo chekuwana mhedzisiro. RDS inofanirwa kuyedza ichimiririra vatengesi nevatengi.
Dare rakaongorora kukura kwechisungo ichi seinotevera. Sekureva kweChibvumirano cheParis uye nhepfenyuro dzeIPCC, chinogamuchirwa chekudziya kwepasirese chinogumira pamadhora mashanu nehafu. Iko kunodzikiswa kunodzikiswa kwe1.5%, na45 se2019, zvinoenderana nedare zvakaringana zvinoenderana nenzira dzekudzikisira sezvakataurwa neIPCC. Naizvozvo, izvi zvinogona kutorwa sechisungo chekudzora. Chisungo chakadai chinogona kungoiswa nedare kana RDS ikakundikana kana kutyisidzira kukundikana mune ichi chisungo. Dare rakaratidza kuti yekupedzisira ndiyo kesi, sezvo mutemo weboka hauna kukwana kuti ubvise kutyisidzira kwakadai.
Sarudzo uye kudzivirira
Saka dare rakaraira kuti RDS nemamwe makambani ari muboka reShell vadzikise kana kukonzera kudzikisira huwandu hwegore rose hwezvose zvinobuda mumhepo (Scope 2, 1 ne2) zvine chekuita nezvebhizimusi reboka reShell uye vakatengesa simba- inotakura zvigadzirwa nenzira yekuti panopera gore ra3 vhoriyamu iyi inenge yave yakadzikiswa neinenge net 2030% kana ichienzaniswa nedanho regore ra45.Dziviriro yeRSD haina huremu hwakakwana kudzivirira iyi odha. Semuenzaniso, dare rakafunga nharo yekutsiva kwakakwana, zvinoreva kuti mumwe munhu achatora zviitiko zveboka reShell kana chisungo chekudzora chikaiswa, zvisina kuratidzwa zvakakwana. Pamusoro pezvo, chokwadi chekuti RDS haisi yega inokonzeresa shanduko yemamiriro ekunze hachizorodze RDS kubva pakurema kwebasa rekuedza uye mutoro mukuderedza kudziya kwepasi kunofungidzirwa nedare.
Izvi zvakare zvinojekesa kuti mhedzisiro yemutongo uyu ndeyei kumamwe makambani. Kana ivo vari ivo vane basa rehuwandu hwakakura hwezvisi (semuenzaniso, mamwe mafuta uye gasi makambani), vanogona zvakare kuendeswa kumatare uye kutongerwa kana kambani ikaita kukwana kusakwana kuburikidza neayo mutemo kudzora izvi zvinobuda. Iyi njodzi yezvemhosva inodaidzira kune yakanyanya kuomarara kudzora mutemo mu cheni yekukosha, kureva kwekambani uye neboka pacharo pamwe nevatengi varo nevatengesi. Nezve mutemo uyu, kudzikiswa kwakafanana sekudzikisira chisungo kuRDS kunogona kuiswa.
Mutongo unokosha mune kesi yemamiriro ekunze yeMilieudefensie inopesana neRDS ine mhedzisiro inosvika kure, kwete kuShell Group chete asiwo kune mamwe makambani anoita basa rakakura mukushanduka kwemamiriro ekunze. Zvakangodaro, iyi mhedzisiro inogona kururamiswa nekudiwa kwekukurumidza kwekudzivirira shanduko yemamiriro ekunze ine njodzi. Une mibvunzo here pamusoro pemutongo uyu pamwe nemhedzisiro yawo kune yako kambani? Zvino ndokumbirawo ubate Law & More. Magweta edu ane hunyanzvi mumutemo wechibvumirano chevanhu uye vanofara kukubatsira.
Next Faira chichemo pamusoro pedare »
pashure «Chibvumirano chevanopa: Chii chaunoda kuziva?